Maitiro Asiri-Ekumhanya Mabhiza Anogona Kubatsirwa Nekushanda NeGaming Influencers | Martech Zone
Vagadziri vemitambo vari kuoma kuregeredza, kunyangwe kune asiri emitambo zvigadzirwa. Izvi zvinganzwika sezvisinganzwisisike, saka ngatitsanangure kuti sei.
Maindasitiri mazhinji akatambura nekuda kweCovid, asi vhidhiyo yemitambo yakaputika. Kukosha kwayo kunoitirwa inodarika $ 200 bhiriyoni muna 2023, kukura kunofambiswa neinofungidzirwa 2.9 bhiriyoni vatambi pasi rese muna 2021.
Global Mitambo Musika Chirevo
Haisi chete manhamba ari kunakidza asiri emitambo mabhureki, asi akasiyana ecosystem akakomberedza mutambo. Musiyano unogadzira mikana yekuburitsa chiratidzo chako munzira dzakasiyana uye kusvika kune vateereri wawakambotambura kusangana navo. Vhidhiyo yemutambo livestreamer inowira seimwe yevana 'hope mabasa, nemusika unotenderera unotarisirwa kuita kusvika 920.3 mamirioni vanhu muna 2024. Kukwira kwema esports kwakakoshawo; zvinotarisirwa kusvika vanhu mamiriyoni 577.2 negore rimwe chetero.
Iine angangoita makumi mana muzana ye media midhiya kukosheswa nemitambo isiri yemitambo, kushambadzira kune vatambi hazvidziviriki. Kutanga-kufambisa mukana kwakakosha kuti udzidze uye unzwisise kushambadzira kwemitambo pamberi pevanokwikwidza. Asi kutanga, iwe unofanirwa kunzwisisa chaizvo kuti mutambo unotaridzika sei muna 2021.
Kubhejera Vateereri Kunotsanangurwa
Unogona kufunga kuti kutamba mitambo kunotongwa nevakomana vechidiki vane isina muganho nguva yemahara - asi izvi hazvigone kubva pachokwadi. 83% yevakadzi uye 88% yevarume inogona kuverengerwa sevatambi. Uye kunyangwe ichokwadi kutamba kunonyanya kufarirwa pakati pevechidiki, 71% yevane makore 55-64 vane makore vanotamba futi. Kana zvasvika kunzvimbo, mitambo ndeyepasi rose. 45% yevaDanes vanoti vanotamba mitambo vs. 82% yeThai, asi hupfumi hukuru hwenyika hunoenderana kuva nekubatana kwakasimba, iyo yakakosha kune vatengesi. Zvekutamba mitambo uye zvaunofarira zvinosiyana pamatanho ehupenyu, dzinza, uye zvebonde.
Nedanho iri rekusiyana mumitambo, zviri pachena zvetsika zvisirizvo hazvimiriri. Asi izvi zvinobatsira sei yako isiri-yekutamba mhando? Zvinoreva kuti une chokwadi chekuwana vatambi vemitambo izvo zvakasikwa zvakakunakira iwe.
Iko Kukosha Kwekutamba Kwemitambo Kufuridzira Kune Asiri-eGame Brands
Vagadziri vemitambo vanonzwisisa maindasitiri uye-zvakanyanya - mutambo wemitambo. Vateereri vavo vateveri vakaomarara, vanobatikana zvakanyanya uye vakafukidzwa zvakafanana muzvinhu zvese zvemitambo. Kutamba kuri padhijitari; gamers vari vanoshingaira, akagozha vezvenhau vatengi. Matekiniki emushandirapamwe akakushandira iwe pachinyakare haangashande pano, kunyanya kana iwe usinga vabatise. Iyo hurukuro ye Twitch kana YouTube, kwete TV kana vezvenhau. Kushambadzira mumitambo kunofanirwa kuita tsika nemagariro kana kuti uchaparadzanisa vateereri vako, uye vanokurudzira inzira yakakwana yekusimudzira zita rako zvachose.
Chii chinobatana nevatambi vemitambo chinokupa mukana wekuwana? Vateereri vakasiyana vanogona kunge vasingawanikwe kumwe kunhu - kunyanya pachiyero chimwe chete. Hova dzemvura dzinowanzo kuve dzakareba maawa, iine mhenyu chat chat inoita kuti igare ichikurukurirana pakati pechiratidziro nevateereri. YouTube Mutambo wakarova 100 mabhiriyoni yekutarisa nguva maawa muna 2020, inenge isinganzwisisike nhamba. Asi hazvisi zvese nezvehukuru.
Ndicho chokwadi chevatambi vemitambo vanowirirana nevateereri vavo, ichigadzira hukama hwakanyanya. MunaGunyana 2020, indasitiri yemitambo yakaona iyo yakakwira kwazvo avhareji chiyero cheiyo 9% kubva kunano influencers (1,000-10,000). Mega influencers (1 miriyoni kana kupfuura vateveri) vaive nechipiri chepamusoro mwero pa5.24%, zvichiratidza kuti kunyange vakakurumbira vemitambo vanokwanisa kuraira vateereri vavo. Zvemitambo zvemitambo zvinonzwa sezvazviri kuvanhu, uye maturusi echinyakare akadai seTwitch chat akagadzirirwa kuwedzera izvozvo.
Mashandisiro Aungaita Bhurandi Yako NeVatambi veGaming
Kune nzira dzakasiyana dzekushandira pamwe nevatambi vekutamba. Pazasi penzira dzekutanga dzatinokurudzira kune asiri-emitambo zvigadzirwa.
Inotsigirwa Kubatanidzwa - Brand inotaura ndeyekudaidzira kwakanaka kwechigadzirwa chako kana sevhisi inosanganisirwa mune zvemukati zvinokurudzira. Cloutboost akamhanyisa mushandirapamwe weHotspot Shield VPN yekuwedzera chiziviso cherudzi uye kutyaira zvigadzirwa kurodha pasi, inotsigira Twitch influencers. Iyi Twitch rutsigiro yaisanganisira kutaurirana kwavo kwega kugadziriswa kwechigadzirwa, pamwe nekukurukura zvakanakira chigadzirwa kazhinji. Iyo yekutsigira yakaratidza kupaaways, kuiswa kweHotspot Shield pane ad mabhendi uye marogo, uye kushandisa yakajairwa chatbot kufona kuzviito.
Anokwikwidza VPN brand, NordVPN, inotarisa zvakanyanya kushambadzira kushambadzira-kunyanya paYouTube. Iwe unowana yavo marangi munzvimbo yese yekutamba, kubva kuvadiki vemitambo vanokurudzira kuPewDiePie. NordVPN inosimbisa iyo kwenguva refu mabhenefiti yeYouTube; vateereri vanozoona vhidhiyo kubva pamwedzi kana makore zvisati zvaitika senge algorithm yepuratifomu uye mushandisi interface haingotarise chete pane zvitsva zvinoteedzerwa. Mukuenzanisa, mapuratifomu akaita seTwitch uye Instagram anotarisana nezvazvino zvirimo.
LG inoratidza mumwe muenzaniso weiyo isiri-yekutamba brand yakanangana nevatambi. Iyo kambani ine nhoroondo yekudyidzana nemitambo YouTubers, ichiratidza kuti LG TV ingave sei sarudzo huru yevatambi. Daz Mitambo yakagadzira iyo LG-inotsigirwa vhidhiyo iyo inopa icho chigadzirwa nenzira yechisikigo, ichipa muenzaniso wakanaka wekuti asiri emitambo mabhureki anogona sei kubvisa kubatana kwechokwadi uye kusvika kune vateereri vatsva.
Kufuridzira Kupa - Kupa kunogara iri nzira huru yekugadzira kubatikana padhuze necheni yako. KFC yakamhanyisa mubatanidzwa wemitambo neTwitch mitsetse kupa vateereri zvipo zvekushambadzira uye makadhi echipo pavakakunda mutambo. Vashandisi vakapinda nekutaipa KFC emote (Twitch-yakatarwa Emoticons) muTwitch chat, uye mibairo yaive tsika-yakagadzirirwa maererano nemutambo urikutambwa. Kuva neyako brand kuburitsa chigadzirwa chakagadzirirwa kumutambo inzira yakanaka yekuzvisanganisa iyo.
Kubheja Zviitiko - Hershey akakwenenzvera chimwe chezviitiko zvikuru zvemitambo zvegore, TwitchCon 2018, kusvika kusimudzira yavo nyowani Reese's Pieces chokoreti bar. Sezvo TwitchCon yakaunza mapuratifomu akakurisa epuratifomu pamwechete pasi pedenga rimwe, Hershey akatsigira Ninja naDrLupo kune vanobatana livestream. Uku kumisikidza kwakapihwa mukana wakasarudzika wekuwana mukana wekusangana pamwe chete mumunhu, pamwe nekubatana kuri kutamba pfungwa yekuti Ninja naDrLupo vari duo rinoshamisa-saHershey naReese.
Kana iwe ukafunga yako brand iri kure-kure kubva kumitambo, usatarise kupfuura MAC Zvizoro zvekurudziro. MAC yakatsigira TwitchCon muna 2019, kumhanya kupa, kupa zvigadzirwa zvekushandisa, uye kuunganidza kwakabudirira madzimai echikadzi vakadai saPokimane kutamba mitambo panzvimbo yavo. MAC SVP Philippe Pinatel akasimbisa kuti Twitch inokurudzira sei kuzvimiririra uye kuzvitaurira munharaunda yayo, maficha anotsanangura MAC sechiratidzo.
Esports - Esports inzvimbo yakasarudzika yemitambo yehunyanzvi umo mabhureki anogona kupindira mairi. Aldi naLidl vakabatana nemasangano ehunyanzvi esports kutsigira majezi uye kugadzira zvemukati kuburikidza nemajoini activations. Aldi neTimu Vitality vakabatana kusimudzira meseji yepamberi yeAldi yekutenderedza kukosha kwekudya kunovaka muviri, kuchisungira kuVitality kutsvaga kwekuita kwekuita.
Sangana uye Greets - Kunge zviitiko zvemitambo, kusangana uye kukwazisa zvinopa nzira yekukwidziridza vatambi vekutamba kunze kwenyika yedhijitari. Semuenzaniso, tarisa Shroud inosangana uye kwazisa paZumiez. Kufambidzana-kwe-munhu kusangana neakatanga emitambo vagadziri vanogadzira kukosha kukuru uye vanounza nharaunda dzakatsaurwa pamwechete.
Iyo indasitiri yemitambo haichisiri iro rakasarudzika boka raimbove. Kubhejera kuri pasirese, uye inomiririra mauto evateveri pamazera, vakomana, uye madzinza. Nepo zvigadzirwa zvemitambo zvisina kumira mushe mukutengesa kwemitambo kare, pane mukana wakakura wemakambani asiri emitambo yekumisikidza pane vateereri vasina kumbobatwa.
Vatambi vemitambo vanomiririra nzira yekumira yekuwana vateereri vemitambo. Kune nzira dzakasiyana siyana dzekugadzira uye kugadzira brand kuziva uye kutengesa kutenderera yako brand. Rangarira kuti urambe uchifunga kuti vatambi vatambi vakadzikama. Zvakakosha mishandirapamwe yako yemitambo inokwezva inoenderana neindasitiri uye nevanokurudzira vaunosarudza.
Tags: cloutboostdaz mitambodrlupoesportsmukadzi anosvikamutambo wekushambadziramitambo inokurudzirayemitambo influencer kushambadziramitambo yekubatanidzahersheykuchinjakfclglivestreamlivestream mutamboNinjanordvpnreeseskutsigirwa kwakabatanidzwapfuratwitch hovatwitchconYouTubeYouTube yemitambozumies